ikhaya AMANQAKU E-FOOTBALL AMAZWE Abadlali bebhola ekhatywayo abangamaNgesi Ibali likaJames Maddison Ubuncinane be-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-Football Genius eyaziwayo ngegama lesidlaliso "Madder". Ibali lethu leJames Maddison yabantwana kunye ne-Untold Biography Facts ikuleta i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela kwixesha lakhe lokuzalwa. Uhlalutyo luquka ubomi bakhe bokuqala, imvelaphi yentsapho, ibali lobomi phambi kobuqili, ukuphakama kwigama, ubuhlobo kunye nobomi bomntu njl.
Ewe, wonke umntu uyazi ukuba ungomnye wezona zihamba phambili ezihlaselayo zesiNgesi zesizukulwana sakhe. Nangona kunjalo, bambalwa abambalwa ngeJames Maddison's Biography enomdla kakhulu. Ngoku ngoku ngaphandle kwee-ado, masiqale.
I-James Maddison Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts- Obomi bakwangoko
UJames Daniel Maddison wazalwa ngosuku lwe-23rd kaNovemba 1996 kunina, u-Una Maddison noyise, uGary Maddison eCoventry, eNgilani. UJames wazalwa njengomntwana wokuqala kunye nendodana kubazali bakhe abathandekayo, u-Una noGary aboniswe.
Imvelaphi kaJames Maddison:
Ngokuchasene nenkolelo eninzi, uJames Maddison uvela kwiRiphablikki yase-Ireland ngenye yomkhulu wakhe oomkhulu o-Irish.
UMaddison wakhula kunye nomntakwabo omncinane kwaye ekuqaleni wayevela kwimvelaphi yentsapho ephakathi. Le nto yayingaphambi kweemali zebhola zebhola ezakha indlu yakhe. Emva koko, yena ayenayo indlu yentsapho edibeneyo eyayinabalandeli abaninzi baseMranco kuquka uYakobi ngokwakhe. Ngezantsi ucezu lobungqina bevidiyo obonisa ukuba uMaddison ugqoke iJersey yaseManchester ngenkathi edlala ibhola njengenkwenkwana.
Wathandana njani nomdlalo:
Indlu yasekhaya kaYakodi Maddison yayimigangatho emibini yokuhamba ukusuka kwi-Alan Higgs Centre eyindlu yaseCoventry City Academy Academy.
Oku kufutshane kwaba isizathu sokuba uMddison unomdla wokuba ngumsebenzi ongeyonto engayiboni njengento engadluliyo.
I-James Maddison Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts- Imisebenzi yokuqala
Ibhola ngaphandle kokungathandabuzeki lihanjiswe uMaddison osemncinci ngaphandle kwezinye izinto ezikhethiweyo zokuzikhethela ukuba wayezenza njengomntwana. Waqala ngokuba ngabazali bakhe babhalise njengomfundi we-pre-Academy ngelixa ehleli kwiSikolo sePrayimari saseRichard Lee.
Iminyaka eyayi-pre-academy ye-Maddison yayisiza yafaka kuyo isiseko esihle sebhola ekupheleni ekuhlawuleni ngokucacileyo izabelo zayo. Wayephakathi kwezinye iibhola zebhola ezithe zachitha ubusuku bazo (emva kweeyure zesikolo) zidlala ibhola, yodwa imidlalo ayithandayo. Ngaphantsi kwesiqulatho sevidiyo esiqinisekisiweyo seseshoni yokuqeqeshwa kwangaphambili kwesikolo sikaMddison esenzeka nge-Matshi 2004.
Ubomi bokuqala kwiCosaventry Academy:
UMaddison wayephakathi kwenkwenkwe encinane eyadlula izilingo zeemfundo eziye zabhalisa nentsha yaseCoventry eneminyaka eyi-9. Kwakuyixesha lokuba abazali bakhe babeguqule isikolo. Maddison ngeli xesha waya kwiCaludon Castle School.
Ubomi kwi-academy buyolisayo, kodwa uMaddison kufuneka enze imihlatshelo eninzi ekuqaleni. Wayekhawuleza ukunyuka kwenyuka esuka kwinkwenkwe encinci kunye neyindleko ukuya kumfundi ongcono kakhulu kwisikolo sakhe seminyaka. Ukukhula okunjalo kwavela ngenxa yokusebenza kanzima okukhokelela ekubanjisweni kwamabhaso kwendima yakhe yokuthatha inxaxheba kwimidlalo yokukhuphisana. Bona ubungqina bevidiyo apha ngezantsi;
I-James Maddison Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts- Indlela eya kwigama
UJames Maddison ngethuba leminyaka eliseneminyaka elishumi elivisayo yaqala ukubonakalisa isiqhelo soqobo somdlali ohlaselayo kunye nomdlali wokudlala kwiqela lakhe leCoventry. Nangona bekuncinane, uMaddison waba Bonisa-Umfana oya kuzisa xa kunikwa umsebenzi wokudala iinjongo. I-feat yaphumela kuye inikwe i-No: i-jnsey 10.
Hayi: Iindima ze-10 zandinceda ndakhe ubuntu bam kuba umgca ophakathi wasoloko egcwele imakhwenkwe emikhulu, eneqhawe elidlala umdlalo okhuselayo njengabachasi, " uthi Maddison.
Ngezantsi kunobungqina bobubungqina bobuchule be-James Maddison bokuqala kunye nekhono lokusetha.
Ukuba ngumqokeleli weSihloko:
UJames Maddison ngokutsho TheGuardian emva kokuvunyelwa ukuba athathe izinto UFilie Coutinho umdlalo. Inombolo kaMaddison: Imisebenzi ye-10 ayiboni nje ukuphuhlisa i-penchant yokufaka amanqaku kunye nokuqokelela ama-trophies. Fumana ngezantsi, iqela lobungqina bevidiyo.
UJames Maddison wagqiba umsebenzi wakhe wolutsha njengomnye wabadlali abakhulu kunabo bonke abanezakhono kwiSizukulwane sakhe seCoventry. Ngenxa yokukwazi ukwenza amanqaku kunye nokudala iinjongo, wayeqeshwe ukudlala iCage Football tournaments apho wadlula khona ukulindela njengesiqhelo.
I-James Maddison Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts- Ukunyuka Kwigama
Ixesha le-2013-2014 yabona uMaddison efakwe kwiqela leqela leCoventry lokuqala apho waqhubeka ekhanya khona.
NgoJanuwari 2016, nangona kwinqanaba lesithathu lebhola leNgesi (League One), iMaddison yaxhaswa kakhulu yiinkampani ze-Premier League kunye neLiverpool ngokukhethekileyo ukuzithenga. Nangona kunjalo, wayevakalelwa ukuba ixesha alizange lilungele ukuba lidlale kwibhola yebhola yaseNgesi.
UMaddison wagqiba ekubeni ahambe eNorwich ngoko wayeza kuhlala esondele kwintsapho yakhe. Kwiinyanga ezilandelayo, ukusebenza kwakhe kweqela lakhe leqela limbonile ehlanganisiwe ENgilani phantsi kwe-21 iqela ngo-Matshi 2016.
Ukulandela ukuqala kwe2018 / 2019 ekuqaleni kweLeicester kunye neenjongo zeNkulumbuso ye-Premier League, yangoku Gareth Southgate Waphoqeleka ukuba abize uJames Maddison kunye nenkwenkwezi yesiNgesi UJadon Sancho kwi iqela eliphezulu Oktobha 2018. Lo mdlalo obalaseleyo wambona iphupha likaMaddison lokudlala ilizwe lakhe aliyinto engadluliyo. Bonke abanye, njengoko bethetha imbali.
I-James Maddison Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts- Ulwalamano lobomi
Uhlobo oluthile olufihlakeleyo lukaJames Maddison lunye olusindayo ukuhlolisisa uluntu ngenxa nje yokuba ubomi bakhe bothando bubucala kwaye mhlawumbi kungabikho umdlalo.
Inyaniso kukuba, uJames Maddison ukhethe ukugxila kumsebenzi wakhe kwaye uye wazama ukuphepha ukukhanya ebomini bakhe. Le nyaniso yenza kube nzima ngathi ukuba sibe neenyaniso ngobomi bakhe bokuthanda kunye nomlando wokuthandana.
I-James Maddison Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts- Ubomi bomntu
Ukwazi uJames Maddison ubomi bakhe buza kunceda ufumane umfanekiso opheleleyo.
UMaddison ngumntu onomdla kunye onamandla kwaye unengqondo evulekileyo kunye nokuhlekisa. Inzondelelo yakhe ebomini kwaye ebaluleke kakhulu intsapho yakhe ayikho imida. Oku kungqina ekuziphatheni kwakhe kunye nokuhlekisayo kubantu abathandayo.
I-James Maddison Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts- Ubomi Bentsapho
UMaddison unomnatha okhuselekileyo wenethiwekhi ukususela kwimvelaphi yakhe yentsapho yexesha eliphakathi. Wonke umntu uye waba negalelo ekuthandeni ubaba wakhe othandekayo uGary Maddison njengoko kuboniswe kwividiyo yobutsha bakhe ngezantsi.
Nangona ixhaswa, uYakobi uyazi ukuba ekugqibeleni uye phantsi kuye ukuba enze kwaye abonise oko akwazi ukukwenza kwi-pitch. Ngaphandle kokumisa ulwalamano-ntombi kunye noyise kwinkundla yebhola yebhola, uMddison uyaziwa ngokusondele ngakumbi kumama wakhe njengoko kuboniswe kwi-post post media.
Bobabini umama nobawo banomdla wokubukela ubomi, umdlalo wabo womntwana ngexesha elipheleleyo kwaye abazange baqonde ukuhamba kunye nelo lizwe ngeveki neeveki ukuba babukele uYakobi enze oko akwenzayo emgangathweni kwidlala.
I-James Maddison Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts- Inyaniso engekho
Inqaku leT Tattoo:
U-James Maddison unengalo yakhe egcwele izitotythi ezingakhange zithandwe ngenxa yefashoni. Zonke iimpawu ezisesandleni sakhe sekhohlo zizodwa kuye.
UMaddison uthathe i-tattoo ukuba achaze iinyaniso malunga nosapho yakhe inendima enkulu efundwayo; "UUthando lwentsapho luyintsikelelo enkulu ebomini. "
Kwakhona, loo mzuzu okhethekileyo weqonga lakhe lobuchwepheshe uphathwe njengom tattoo engalo yakhe. Ngaloo mini, iphupha lakhe lokuba ngumdlali webhola lezemidlalo ekugqibeleni lazaliseka.
UJames Maddison wayebanjwe ekhwabaneni elibandakanya yena, abahlobo bakhe kunye neqela elingaziwayo. Wayeqhayisa ngamanye amazwe angama-£ 7,000-ngeveki umvuzo ngaphambi kokuba umhlobo wakhe ahlasele elinye lamadoda ngenxa yokungamkeli uMddison njengodumo. Xa kucelwa ukuba lilandise isiganeko, enye yexhoba yathi;
"Uthe wathola i-£ 7,000 ngeveki. Wathi uthe wathola ngaphezulu kwenyanga kunokuba senza ngonyaka. Akazange abuze into endiyenzayo. Wathi izicathulo zakhe zazingaphezu kweengubo zethu. "
QHUBEKA: Siyabulela ukufunda iJames Maddison Childhood Indaba kunye ne-Untold Biography Facts. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.